C/raxmaan C/shakuur oo soo dhaweeyay go'aankii Galmudug iyo Hirshabeelle
Hoggamiyaha mucaaradka ah C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa soo dhaweeyay go'aankii dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabelle uga soo horyimaadeed muddo kordhinta hey'adaha dowladda Federalka, isagoo ku tilmaamay mid geesinimo leh.
"Waxaan u mahadcelinayaa madaxweyneyaasha maamul gobolyeedyada Galmudug iyo Hirshabelle oo go'aan geesinimo leh qaatay, kuwaas oo ka horyimid muddo kororsigii. Waxaan isna u mahadcelinayaa Ra'isul Wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble oo go'aankaas taageeray, kuna raacay in loo noqdo fulinta heshiiskii 17-kii September" ayuu yiri hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir C/raxmaan C/shakuur.
Waxa uu sheegay in Ra'isul Wasaare Rooble uu kaalin weyn kulahaa inay hoos u dhacdo dhiillada colaadeed ee maalmahaan ka jirta magaalada Muqdisho.
C/raxmaan C/shakuur ayaa ka mid ah xubnaha mucaaradka ee sida weyn uga horyimid go'aankii Golaha Shacabka ee 12-kii April ee muddo kordhinta hay'adaha dowladda, isagoo ku tilmaamay mid sharci darro ah.
Dhinaca kale wuxuu ciimada ugu baaqay inay ku laabtaa xeryahooda iyo furimihii ay ka soo baxeen.